नेपालमा नै बनेको पहिलो ईलेक्ट्रिक मोटरसाईकल बैशाख १० मा सार्वजनिक हुने, कति पर्छ मुल्य ? (भिडियो सहित) « गोर्खा आवाज
नेपालमा नै बनेको पहिलो ईलेक्ट्रिक मोटरसाईकल बैशाख १० मा सार्वजनिक हुने, कति पर्छ मुल्य ? (भिडियो सहित)
२ बैशाख २०७८, बिहीबार ००:००
काठमाडौं – आगामी ‘बैशाख १०’ गते सार्वजनिक गर्ने बताइएको ‘पी–०’ नामक यात्री मोटरसाइकलको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । युवा इन्जिनियरहरुको समूहले बनाएको सो मोटरसाइकलको भिडियो यात्री मोटरसाइकल्स फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपि सो मोटरसाइकल पहिले नै सार्वजनिक गर्ने बताइएता पनि विभिन्न कारणले सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।
यसमा ट्याकिङ्ग सिष्टम, ब्याट्री ब्याकअप सम्पुर्ण कुराहरु डिष्ले मा नै देखाउछ । यस्तै चार्जिङ्ग स्टेशनको नभएको कारण नेपालमा फस्टाउन नसकेको ईलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुलाई मध्यनजर गर्दै यात्री आफैले देशभर चार्जिङ्ग स्टेशन बिस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
‘पी–०’ भने आगामी बैशाख १० गते सार्वजनिक गरिने छ । सिंगल चार्जमा २३० किलोमिटरको रेन्ज दिने सो मोटरसाइकलले ‘४८ किलोवाट अर्थात ६४ एचपीको’ पावर दिने बताइएको छ । पी–० नाम समेत दिइएको सो मोटरसाइकल महंगो हुने भनिए तापनि यसको मूल्य अहिले नै सार्वजनिक गरिएको छैन । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।